Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni Skid Factory |China Dehydration Skid Abavelisi, Suppliers
Custom 50 ×104TPD isityalo sokunyanga igesi yendalo
Emva kokufunxwa kwamanzi, i-TEG ihlaziywa ngendlela yoxinzelelo lwe-atmospheric yokufudumala ityhubhu yomlilo kunye nokuvuselelwa.Emva kokutshintshiselana kobushushu, ulwelo oluphelelwe bubushushu luyapholiswa luze lubuyiselwe kwi-TEG yokufunxa inqaba emva koxinzelelo lokuphinda kusetyenziswe.
IsiXhobo esi-3 se-MMSCD esiLungisiweyo sokuSetyenziswa kweGesi kwiGesi yeNdalo
Sisebenza ngokukhethekileyo kunyango lwe-oyile kunye negesi ephantsi komhlaba, ukucocwa kwegesi yendalo, unyango lwe-oyile ekrwada, ukukhanya kwe-hydrocarbon recovery, isityalo se-LNG kunye nejenereyitha yegesi yendalo.
Ukususwa kwamanzi enziwe ngokufanelekileyo kwiGesi yeNdalo ngeYunithi ye-TEG yokuTyeka emanzini
I-TEG Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kubhekiselele ekubeni irhasi yendalo ephelelwe ngamanzi iphuma kumphezulu wenqaba yokufunxa kwaye iphuma kwiyunithi emva kokutshintshiselana kobushushu kunye nolawulo loxinzelelo ngolwelo olubhityileyo olunobushushu berhasi eyomileyo.
I-Glycol dehydration yegesi yendalo
Iinkqubo ze-Rongteng glycol dehydration zisusa umphunga wamanzi kwi-gesi yendalo, isixhobo sokunyanga igesi yendalo, esinceda ukuthintela ukubunjwa kwe-hydrate kunye nokugqwala kunye nokwandisa ukusebenza kakuhle kwemibhobho.
I-Molecular sieve dehydration skid
I-Molecular sieve dehydration skid sisixhobo esiphambili sokucoca igesi yendalo okanye ukulungiswa kwegesi yendalo.I-molecular sieve yikristale ye-alkali yensimbi ye-aluminosilicate enesakhiwo sesakhelo kunye nesakhiwo esifanayo se-microporous.